အဘယ်မှာသင်ကမတ်လတွင်စီရင်အခမ်းအနားကျင်းပနိုင်သလား | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်မှာသင်ကမတ်လတွင်စီရင်အခမ်းအနားကျင်းပနိုင်သလား
ဂျူး Mardi Gras မည်သူမဆို? ဝင်ရောက် ပျြောပှဲသဘငျ စီရင်! အာဒါ 14 နှင့် 15 ရက်စီရင်ကျင်းပ, မတ်လနှင့်တိုက်ဆိုင်သောဂျူးပြက္ခဒိန်၏ဒွါဒသမလ. စီရင်လေထုကဲ့သို့သောပွဲတော်ရှိပါတယ်, ရှင်ဘုရင်အာရွှေရုအတူ - လူတို့သည်မိမိတို့အကောင်းဆုံးဥပုသျနေ့အဝတ်အစားသို့မဟုတ်ဖန်စီစားဆင်ယင်ဝတ်ထားဖြစ်စေနှင့်အတူ, ဝါရှတိ, မိဖုရားဧသတာ, လူကြိုက်အများဆုံးဝတ်စုံအကြားမော်ဒကဲနှင့်ဟာမန်. သင်ပျော်စရာအတွက်အဘယ်မှာရှိ join လို့ရပါတယ်? ဤများမှာ အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ မတ်လအတွက်ဂျူးပွဲတော်ကြီးစီရင်ဆင်နွှဲရန်.
သငျသညျစီရင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအလင်းရစေ. ဝတ်စုံနှင့်အတူ, , ဂိမ်းနှင့် အရက်သောက်စာရေး, စီရင်ဂျူးဘာသာအရှိဆုံး raucous တစ်ခုဖြစ်သည် အားလပ်ရက်. သငျသညျဒုစရိုကျဟာမန်အစီအစဉ်များပြတ်တောက်လှပသောဧသတာကိုသိပါလိမ့်မယ်, အဆိုပါအရက်မူးလာပြီများ၏ထုံးစံနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် hamantaschen များမှာ. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်ခန့်မှန်းနေကြပါတယ် အားလပ်ရက်များ သောသင်အံ့သြသွားစေခြင်းငှါ, သငျတို့သမှန်လျှင်သိရန်ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အဆိုပါပွဲတော်အတွက်ဝင်ရောက်ပေါ်နှင့်စီရင်ကျင်းပ.
ဧသတာ၏စာအုပ်စီရင်၏အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာသော. အဆိုပါဇာတ်လမ်းဧသတာအောက်ပါအတိုင်း, အဘယ်သူသည်ရှင်ဘုရင်အာရွှေရု၏ဇနီးနှင့်ဘုရင်မဖြစ်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှား၏အာရွှေရုငါဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်.
အခါ King ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်, ဟာမန်သည်, အင်ပါယာအတွင်းယုဒလူအပေါင်းတို့ကိုသတ်ဖို့သူ့ကိုဖွားယော, မိဖုရားဧသတာဝမ်းကွဲနှင့်မွေးစားဖခင်, မော်ဒကဲသည်, သူမ၏အပေါ်ဖုန်းခေါ်ရန် သူမ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုသုံးပါ လူအသက်ကိုသတ်တတ်သောအစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့.
အဆိုပါပုံပြင်ဧသတာ၏စာအုပ်အတွက်ပြောပြသည်ဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါ Megillah အဖြစ်လူသိများ, ဟာမန်နှင့်ဆွဲထားနှင့်ဂျူးလူမျိုးကို Saved ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအဆုံးသတ်.
ဤတွင်တစ်ဦးအေးမြစကားပြောဆိုမှု starter ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျသိခဲ့ပါ ဧသတာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် သက်သတ်လွတ် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်ဦး flexitarian). Midrash အဆိုအရ, မိဖုရားဧသတာရှင်ဘုရင်အာရွှေရု၏ဝင်းထဲမှာအသက်ရှင်စဉ်အခါ, သူမ kashrut ၏ဥပဒေများကိုချိုးဖျက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူမပဲ၏အဓိကအားပါဝင်သည်ဟုတစ်သက်သတ်လွတ်အစားအစာနောက်တော်သို့လိုက်(အစားအသောက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ). ဒီအတွက်ကြောင့်, တစ်ဦးအစဉ်အလာရှိ စား ပဲမျိုးစုံနှင့်ပဲစေ့တွေဟာသင်စီရင်ကျင်းပသည့်အခါ. (နောက်ဆုံးတော့, သင်တို့ရှိသမျှသည်အရက်များပြီးနောက်ကျန်းမာတစ်ခုခုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်နှင့် hamantaschen)
ရထားအားဖြင့် Antwerp သို့ဘရပ်ဆဲလ်
ရထားအားဖြင့် Antwerp သို့အမ်စတာဒမ်
ရထားဖြင့် Antwerp သို့ Lille
ရထားအားဖြင့် Antwerp မှပဲရစ်
ဒီပွဲတော်ပြီးသားအလုံအလောက်ကြောက်မက်ဘွယ်အသံမပြုခဲ့ပါလျှင်, ယခုကြှနျုပျတို့လည်းလက်ဆောင်ရ! mishloach manot အကြောင်းကိုဧသတာ၏စာအုပ်ထဲတွင်ကျမ်းပိုဒ်ကျနော်တို့သင့်ကြောင်းဖော်ပြထားသည် ပေးပို့ အချင်းချင်းလက်ဆောင်များ, ကိုယ့်အချင်းချင်းလက်ဆောင်တွေမပေး. ရလဒ်အနေဖြင့်, ကောင်းကင်တမန်ကနေတဆင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှ၎င်း၏ Goodies သင့်ရဲ့ packets တွေကိုပေးပို့ဖို့ပိုကောင်းက, ပဲလုံးလုံးလြားလြားကသူတို့ကိုပေးရခြင်းထက်. မည်သူမဆိုတစ်ဦးသွားလာရင်း tetween အဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသညျ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ဆောင်တွေကယ်မနှုတ်အားကူညီနိုင်ရန်စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဓါတ်လှေကားထဲမှာပင်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးစုဆောင်းဖို့အခမဲ့ခံစားရ.
ရေကန် Como တူရင်ရထားမှ
ဧသတာ၏စာအုပ်လည်းဘုရားကျောင်းရန်မညွှန်းဆိုစေသည်, ဆုတောင်းပဌနာမှ, သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောဂျူးအလေ့အကျင့်ရန် kashrut [kosher စောင့်ရှောက်ခြင်း].
ကျနော်တို့သေး Hamantaschen ကျော်မများမှာ ...
သူတို့ကပုံတြိဂံဟာမန်နှင့်ဦးထုပ်ကိုပုံဆောငျဖို့ဒီဇိုင်းခံရဖို့ကဆိုပါတယ်ခဲ့ကြသည်, နားရွက်သို့မဟုတ်အိတ်ကပ်. သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုအနည်းငယ်ပိုမိန်းကလေး. တချို့ကဒီကွတ်ကီးတွေကိုဟာမန်နားရွက်ကိုကိုယ်စားပြုလို့ပြော (ထိုသူတို့အဘို့ဟေဗြဲ name ကို, ဟာမန်သည် oznei, ဒီရုံကိုဆိုလိုသည်), နှင့်သူ၏ကွပ်မျက်မခံရခင်တစ်ဦးရာဇဝတ်ကောင်နားရွက်ဖြတ်တဲ့ထုံးစံကိုရည်ညွှန်း. အဆိုပါသုံးထောင့်အဘယ်သူ၏ပါဝါဟာမန်သည်အားနည်းခြင်းနှင့်ယုဒလူတို့ကယ်ဖို့ဧသတာရန်ခွန်အားပေးသောသုံးဘိုးဘေးကိုယ်စားပြု. သို့သျောလညျးကိုအခြားသီအိုရီ: ဂျာမန်စကားလုံးသောကြောင့် အိတ် "အိတ်" သို့မဟုတ် "အိတ်ကပ်ကိုဆိုလိုသည်,"ဟုအဆိုပါ cookies များကိုဟာမန်အိတ်ကပ်သူကိုကမ်းလှမ်းငွေကိုဆိုလိုနိုင် ဘုရင် ယုဒလူတို့သတ်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုချက်များအတွက်.
Leipzig to ဘာလင်ရထား
Ashkenazi ယုဒလူတို့အဘို့, ဖြစ်ကောင်းအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်ကျင်းပ အစားအစာကိုအစဉ်အလာ စီရင်အပေါ်ကဲ့သို့သောတြိဂံပုံအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းဖြစ်ပါသည် kreplach နှင့် hamantashen pastries. Kreplach မြေပြင်အမဲသားသို့မဟုတ်ကြက်သားနှင့်ပြည့်စုံတစ်ဦးခေါက်ဆွဲတြိဂံဖြစ်ပါသည်. Hamantashen မကြာခဏရက်စွဲများသို့မဟုတ်ဘိန်းမျိုးစေ့များဖြင့်လုပ်သောအဆာပတျဝနျးကငျြမုန့်စိမ်း pastry ၏တြိဂံများမှာ.
ဒီအစဉ်အလာများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးရှင်းလင်းချက်တစ်ခုမှာဤအတြိဂံအစားအစာများဟာမန်သည်သုံးခြောငျဦးထုပ်ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်း. သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်ဦးထုပ်၏ဒီစတိုင်ဤအချိန်ကာလအတွင်းရေပန်းစားမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းစောဒကတက်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်, အခြားအတွေအများကြီးရှိပါတယ်, အငယျဆုံးသောလူသိများ ကျနော်တို့စီရင်မှာတြိဂံပုံအစားအစာများကိုစားဘာဖြစ်လို့များအတွက်ရှင်းလင်းချက်.
Frankfurt မှ Munich မီးရထားစျေးနှုန်း
Stuttgart မှ Munich မီးရထားစျေးနှုန်း
ရှင်ဘုရင်အာရွှေရုအီသီယိုးပီးမှအိန္ဒိယကနေစိုးစံလေ၏, မှ “က Kush တောင်တန်းတွေနဲပစ်။” ဟီဘရူးအတွက်, စကားလုံး လမ်းလျှောက် နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများ “အိန္ဒိယ” နှင့် “ကြက်ဆင်။” ထို့ကြောင့်, သူတို့စီရင်ကျင်းပသည့်အခါလူအခြို့ကြက်ဆင်ကိုစား. အခြားသူများကထိုကဲ့သို့သောအဲသယောပိပဲဟင်းအဖြစ်အဲသယောပိဟင်းလျာများကိုစား. သင့်ရဲ့စီရင်မုန့်ညက်သို့ကြက်ဆင်ပန်းကန်ထည့်သွင်းရန်, ကြိုးစား caramel ကြက်သွန်ပိုးစာဟင်းရည်နှင့်ကင်ပြီးမှကြက်ဆင် cranberry နှင့်သစ်တော်သီးချတ္တနီးနှင့်အတူသို့မဟုတ် panko crusted ကြက်ဆင် cutlets.
Nantes မှ Bordeaux ရထားစျေးနှုန်း
လိုင်ယွန်မှ Bordeaux ရထားစျေးနှုန်း
Marseilles to Bordeaux ရထားစျေးနှုန်း
ဂျုးဘာသာဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်, ရှငျဘုရငျ Achashverosh နေထိုင်စဉ်မိဖုရားဧသတာတစ်ဦးသက်သတ်လွတ်အစားအစာကိုစားကြ၏ နန်းတော်. သူမ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်, များစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့စီရင်ခံရသောပွဲများအတွက် meatless မုန့်ညက်အစေခံ. ဧသတာအစားအသောက်များတွင်အခွံမာသီးများပါဝင်သည်, မျိုးစပါး, အစေ့, နှင့်ပဲပင်. ဤသည်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းဘိန်းမျိုးစေ့များစားရန်ထုံးစံနောက်ကွယ်မှတဦးတည်းရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်, mohn အဆာအဖြစ် Ashkenazi hamantaschen အတွက်အများဆုံး icon တက်ကိုဖွင့်ထားတဲ့.
စီရင်၏ဤဖော်ပြချက်အကျွမ်းတဝင်အသံပါလျှင်, ကဘာမျှမနဲ့တူ Mardi Gras အဖြစ်ဤမျှလောက်သောကွောငျ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ.
စီရင်ခြင်းနှင့် Mardi Gras အဓိကမတိုင်မီတစ်ဦးချင်းစီကဆြုံးအတိအကျတစ်လ, ဖြစ်ကောင်း အဆိုပါ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအစဉ်အလာ၏အဓိကဘာသာရေးပွဲတော်. တစ်ခုချင်းစီကိုစားသုံးခြင်း, ဝိရောဓိ, နက်ရှိုင်းသောဘာသာရေးအလေး၏ကာလတစ်ခု farcical နိဒါန်းအဖြစ်. ခရစ်ယာန်များအတွက်, အဆီများ၏ပိုလျှံအင်္ဂါနေ့အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် တစ်ဦးထွက်ပေါက် ဥပုသ်ကာလမတိုင်မီကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခိုင်အမာနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒပြည့်အဘို့, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို mortification ၎င်း၏တာရှညျကာလနှင့်အတူ.
စီရင်သည့်အဖြစ်ရှုမြင်နေသည် တံခါးပေါက် အဆိုပါလွန်မိပြီဒါပေမယ့်နက်ရှိုင်းစွာလေးနက်ခြင်းနှင့်တောင်းဆိုကာလမှ. ထုံးစံစီရင်ပြီးနောက်နံနက်ကစတင်ခဲ့သည်ကြောင်းပသခါပွဲကိုပြင်ဆင်၏.
Cologne ရထားစျေးနှုန်းသို့ Frankfurt
Cologne ရထားစျေးနှုန်းသို့ Hanover
အခုတော့အကြှနျုပျတို့သညျအသေးစိတျပေးထားပြီ, ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်မှာ action ကိုတွေ့ပါရန်သင့်အားပြောပြပါရစေ!
ဘူဒါပက် မတ်လထဲမှာပျော်မွေ့ဖို့အများကြီးကောင်းသောနွေဦးပွဲတော်နှင့်အတူဆောင်းတွင်းအအေး၏အဆုံးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့. စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေများကိုအထူးဖွင့်ထားသည် ချီတက်ပွဲ၌. အမျိုးမျိုးသောနေရာများနှင့်ဖြစ်ရပ်များဘူဒါပက်အတွက်စီရင်ကျင်းပ. နောက်ထပ်ပိုပြီး, အကြီးဆုံး Dohany လမ်းတရားစရပ်အပါအဝင်ဘူဒါပက်အတွက်အများအပြားတရားစရပ်တို့၌. ထို့အပွငျ, ဘူဒါပက်အတွက်ဂျူးလူမျိုးနိုင်ငံသားတွေများအတွက် Balint အိမ်အသိုင်းအဝိုင်းအလယ်ဗဟိုစီရင်ဘို့ဖြစ်ရပ်များကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်.
အခုတော့ Ariel ကအတန်းထဲတွင်ဒုတိယနှစ်တွင်အဘို့အဖှဲ့စညျး – ဂျူးကျောင်းသားများဂျီနီဗာပြည်ထောင်စု. တကယ်တော့, ထက်ပိုပြီးရှိပါတယ် 300 ကျောင်းသားများအတွက် အောက်ပါနိုင်ငံများမှနှင့်လူငယ်လူကြီးများ: ဆွစ်ဇာလန်, ပြင်သစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, သြစတြီးယား, နှင့်အခြားသောအရပ်တို့ကို. ဤအ Purim ပါတီခရီးသွားများသည် Purim ကိုထူးခြားစွာအတူတကွဆင်နွှဲရန်တွေ့ဆုံကြလိမ့်မည် တနင်္ဂနွေ ဇူးရစ်အတွက်. အဘို့ လက်မှတ်တွေ နှင့်ပိုပြီးအချက်အလက်, ကူးခေါင်း Ariel facebook စာမျက်နှာ.
Lucerne မှ Zurich ရထားစျေးနှုန်း
Lugano to Zurich ရထားစျေးနှုန်း
ဒီနှစ်, ဆင်နွှဲ အတွက်စီရင် ပဲရစ်. အလင်း၏စီးတီး, ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်များ၏စီးတီး, အနုပညာများ၏စီးတီး. ဒါဟာအစယခုမယုံနိုင်စရာ Young ကဂျူးလူမျိုးများ၏စီးတီးဖြစ်ပါသည် Morristown စီရင်ပါတီ! သင့်ရဲ့အများဆုံးကြော့နှင့်အတူလာကြ Parisian စီရင်ဝတ်စုံများ. သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီပါတီကိုရှာ အတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Mayo ဖျော်ဖြေအနုပညာစင်တာမှာ Morristown. အဆိုပါဖြစ်ရပ်သူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် အသက် Young ကဂျူးလူမျိုးပညာရှင်များများအတွက် 21 သို့ 39. လက်မှတ်တွေကိုရယူလိုက်ပါ ဒီမှာ
London မှ Paris ရထားစျေးနှုန်း
Marseille သို့ Paris Train စျေးနှုန်း
သင့်ရဲ့ရှာဖွေနေဖန်စာအုပ်ကတဆင့်အပြင်အဆင်စီရင်လက်ဖက်ရည်ပါတီတစ်ခုလက်မှတ်လာကြ. လှပတဲ့မှာ Hosted Aubrey Park ဟိုတယ်၌ အဆိုပါဥယျာဉ်အခန်းတွင် တနင်္ဂနွေ 17 မတ်လ, 2019 3pm မှာ. ကောင်းသောကုမ္ပဏီပျော်မွေ့, ဆိုးသောအရာတို့ကိုစာရေးစားဆုအနိုင်ရ. ဒါဟာကိုယ့်သေအချာများနှင့်သေအချာရရှိသွားတဲ့. အဆိုပါလက်မှတ်စျေးနှုန်းကိုလက်ဖက်ရည် / ကော်ဖီလည်းပါဝင်သည်, ကိတ်မုန့်, scones, နှင့် အသားညှပ်ပေါင်... နှင့် hamantaschen! လက်မှတ်တွေကိုရယူလိုက်ပါ ဒီမှာ
Rotterdam to London London ရထားစျေးနှုန်းများ
စီရင်ဘို့ party ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးနေရာအရပ်သို့ရောက်ရှိရထားအားဖြင့်လွယ်ကူသည်. ရုံကူးအပေါ်ခေါင်း SaveATrain နှင့်မိနစ်များတွင်လက်မှတ်ဝယ်ယူ, အဘယ်သူမျှမဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အခကြေးငွေနှင့်အတူ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrate-purim%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml သင် / TR မှ / က de သို့မဟုတ် / ru ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
#စီရင် #PuriminEurope #PuriminMarch #Purimparty europetravel ပွဲတော် longtrainjourneys ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား